I-EN standard SCBA cylinder, China EN standard SCBA cylinder abavelisi, abaxhasi, iFektri -Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
Ulapha : Ikhaya>iimveliso>I-SCBA (Isixhobo esiphefumlayo sokuziphefumla) Iicylinders eziyinxalenye
Izixhobo: i-carbon fiber kunye ne-AA 6061.
Ubunzima bokukhanya: ukunciphisa ubunzima ngama-70% kunesilinda yerhasi yentsimbi.
Uxinzelelo oluphezulu: 300bar, 4500psi.
SinoCleansky EN standard i-SCBA Cylinder yi-aluminium liner ene-carbon fiber ngokupheleleyo.
Uluhlu olupheleleyo lwemveliso luvela kwi-1.5L ukuya kwi-9L ngoxinzelelo lokusebenza kwe-bar ye-300.
Ngeli xesha, i-EN standard SCBA Cylinder yenziwa ngokungqinelana ngokungqinelana nomgangatho we-EN12245, Ukuvunywa kwe-TPED, kunye neengxelo zovavanyo lomntu wesithathu ezihambelana ngokupheleleyo neemfuno zentengiso zaseYurophu.
(Izinto ezinazo izixhobo zokuphefumla ezinazo)
imathiriyeli: Isilinda nganye ilitha lealuminium ene-carbon fiber esongelweyo
ugqibezela: Umzimba oxutywe ngendawo engapeyintwanga yendalo ngumgangatho. Umgubo opheleleyo womzimba uyafumaneka.
Ukucoca: Iisilinda zibonelelwa zicocekile
ukusetyenziswa:Kukulungele ukugcina ioksijini.
EN standard SCBA Isilinda
Iisilinda ziya kupakishwa ngeplastiki yebhola kunye nebhokisi yebhokisi nganye isilinda ukuqinisekisa ukuhanjiswa okukhuselekileyo, kunye nepallet okanye ngaphandle kwepallet kwisitya, 20ft okanye 40ft.
Iisilinda zihanjiswa nengxelo yovavanyo eneenkcukacha, ezinje ngengxelo yovavanyo lwefektri, okanye ingxelo yovavanyo yomntu wesithathu, njl.
Yintoni impahla yeliner yesilinda yeSCBA?
IAluminiyam ingxubevange 6061.
Kuthekani ngokusetyenziswa kolu hlobo lwesilinda?
Ukusetyenziswa kwesilinda se-SCBA ikakhulu kubandakanya abacimi-mlilo abaziqulathileyo izixhobo zokuphefumla (i-SCBA), ioksijini yenqwelomoya kunye neendlela zokubaleka ezinokungena, kunye nezinye izinto ezifuna ubunzima bokukhanya, ugcino oluphezulu lwegesi njl.
Kuthekani ngexesha lokuhambisa lolu hlobo lwesilinda?
Ngokusekwe kudidi nobungakanani, ukusuka kwiintsuku ezingama-20 ukuya kwiintsuku ezingama-45.